Sijongene neXesha loBuso?, Hayi enkosi, ngeGalaxy Tab senza iminxeba yevidiyo | I-Androidsis
Ngokumiliselwa kwe-iPhone 4 yafika, kakuhle ngaphezulu kokufika kwayo kwathiwa igama kwakhona, ukusebenza kwezinye iifowuni ezinje ngeefowuni zevidiyo ebekuxhasile iminyaka emininzi. Lo msebenzi awuzange usebenze ngokwenene, mhlawumbi kuba ngelo xesha le fowuni yevidiyo kwakufuneka yenziwe kwinethiwekhi ye-3G kwaye iindleko zaziphezulu. Kule mihla, enkosi ngonxibelelwano lweWi-Fi kunye namaxabiso edatha, ukusetyenziswa kwayo kunokuba yinto ethe gabalala.
U-Apple uphinde wawenza lo msebenzi kwisixhobo sakhe samva kwaye uye wawubiza ngokuba yiFaceTime kodwa kunokwenzeka ukuba ufikelele kulo msebenzi ukuba uqhagamshelwe ngonxibelelwano lweWifi. Kwi Android Zininzi izixhobo ezilungiselelwe ngehardware, nangakumbi nangakumbi, ukuze ukwazi ukwenza iifowuni zevidiyo, kwaye kufanelekile kuphela khuphela usetyenziso kwiNtengiso ye-Android ukulungiselela ukuqhuba ezi ncoko zobuso.
Xa i-iPad iboniswa, sonke besilindele ukuba ibandakanye ikhamera yangaphambili ukuze ikwazi, njengomntakwabo omncinci, kwiFaceTime kodwa ngelishwa ayizisanga. Sele inamahemuhemu okuba isizukulwana sesibini sale thebhulethi siza kufaka ikhamera yangaphambili, ngokuqinisekileyo imisebenzi yayicinga ukuba abasebenzisi bayo babengekakulungeli ukusebenzisa le khamera kwi-iPad kwaye ngoku. Isamsung ayifuni ukuphoswa lithuba okanye ithuba kwaye ibandakanye ikhamera yangaphambili kuyo Ithebhulethi ye-Android, iGalaxy Tab.
Kulo I-Android Market Kukho izicelo ezinje ngeFring ekwaziyo ukwenza iifowuni zevidiyo ngale thebhulethi okanye nangayiphi na Idivaysi ye-Android nokuba ziinethiwekhi zeWi-Fi okanye iinethiwekhi zedatha. Le ukubheja yi Samsung kunye nokusetyenziswa kwayo kunokubonwa kwezi vidiyo zilandelayo kwaye ngumgangatho ovela kwinkampani yaseKorea ocacileyo xa kufikwa ekuthetheni ngethebhulethi yakho.
Ngaba iFaceTime iyakubamba kwakhona, uxolo, umnxeba wevidiyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Sijongene neXesha loBuso?, Hayi enkosi, ngeGalaxy Tab senza iminxeba yevidiyo
Umbuzo. Ukuba ifowuni ye-Android ekuthethwa ngayo ayinayo ikhamera yesibini ngaphambili, akunakwenzeka ukwenza umnxeba wevidiyo, akunjalo?
@Pepe hayi, akukho fowuni yevidiyo, kodwa inakho (ukuba inkqubo yenkqubo iyakuvumela) ukusasaza okubonwa yikhamera yakho kunye nokuviwa ngumboko wakho.
Be Kunganzima ukubona omnye umntu esebenzisa ikhamera engasemva ukuze bakubone. Kodwa yiza ... phambi kwesipili kuya kubakho i-XD
Ewe, kodwa ixesha lokujongana lisebenzisa inethiwekhi ye-3G ngenqanaba layo eliphantsi, umnxeba wevidiyo uhlukile, kwaye kuyabiza kakhulu.
I-interface ye-MIUI, ubuso obunomtsalane bokuphakamisa i-Android yakho
Sebenzisa i-Android- Idesktop